ဒူဒူကြီး: Ionization smoke detectors နဲ့ Americium
Americium (isotope Am-241) ကို၊ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှ Glenn Seaborg ဆိုတဲ့၊ Nuclear Chemist တဦးက၊ ၁၉၄၄ မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ တကယ်တော့ Americium ဟာ၊သဘာဝတွင်းထွက်ဒြပ်စင် သို့မဟုတ် သတ္တုအမျိုးအစား တခုမဟုတ်ပဲ၊ man made metal လို့ခေါါတဲ့၊ ဖန်တည်းထုတ်လုပ်မှုမှရလာတဲ့ သတ္တုတမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်Nuclear Reactors တွေနဲ့ Nuclear Detonation တွေမှာ၊ Plutonium atoms တွေနဲ့ neutrons တွေပေါင်းစပ်ရာကနေ၊ ရလာတဲ့ Silver-white crystalline metal ငွေမှင်ရောင်သတ္တုအခဲလေးပါတဲ့။
Americium ကနေ၊ တခြား radio active isotope အတော်များများကို ထုတ်ပေးပေမယ့်၊ radio active isotope AM 241 ကိုသာအသုံးများသမို့၊ Americium ဆိုတာနဲ့ AM 241 ကိုသာပြေးမြင်ကြ ပါသတဲ့။ AM 241 ဟာ၊ primarily emitting မှာ၊ alpha particles တွေတင်မက၊ gamma rays တွေကိုပါထုတ်လွှင့်ပါ သတဲ့။ ဒါ့အပြင် AM 241 နဲ့ beryllium mixture အရောအနှောက neutrons တွေကိုလည်း၊ ထုတ်လွှင့်နိုင် ပါတယ်။
AM 241 ရဲ့ သက်တမ်း တနည်းအားဖြင့် half-life ဟာ၊ နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားနဲ့ ပြောရရင် ၄၃၂. ၇ နှစ် ရှိပါသတဲ့ ။ radio active decays process မှာ၊ alpha နဲ့ gamma rays တွေ ထုတ်လွှင့်ရင်း၊ Neptunium 237 အဖြစ်၊ ဘဝ ပြောင်းသွား ပေမယ့်၊ radio active radiation ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေ ထုတ်နေတုန်းလို့ ဆိုပါသတဲ့။ နောက်ဆုံး Bismuth 209 ဘဝကိုရောက်မှသာ၊ non-radio active element အဖြစ်၊ ဘဝကို အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။
AM 241 ကို၊ Ionization smoke detectors တွေထဲမှာ၊ ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုရုံမက၊ gamma rays ကို အသုံးပြုတဲ့၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ၊ medical diagnostic devices တွေ၊ fluid-density gauges တွေ၊ air craft fuel gauges တွေ၊ distance-sensing devices တွေနဲ့ thickness measurement gauges တွေ ထဲမှာလည်း၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
NDT non-destructive test ဆိုတဲ့၊ သံပြားအထူအပါးတိုင်းတဲ့အခါ AM 241 နဲ့ beryllium mixture ကထုတ်ပေးတဲ့၊ neutrons တွေကိုအသုံးပြုတိုင်းတာခြင်းမို့၊ thickness measurement gauges ကို ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာများ နဲ့ ရေယာဉ်ဗိသုကာများ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Ionization smoke detectors တွေနဲ့ NDT testing equipments တွေကထုတ်လွှင့်တဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာ၊ ပမာဏ အနည်းငယ်သာရှိပေမယ့်၊ radio active material မို့၊ သတိထားကိုင်တွယ်ဖို့လိုအပ်သလို၊ စွန့်ပြစ်ရာမှာ လည်း စနစ်တကျစွန့်ပြစ်ဖို့၊ လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Ionization smoke detector chamber
radio active material နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေဖို့၊ လုံလောက်တဲ့ safety gear အကာအကွယ်တွေမပါပဲ၊ Ionization smoke detectors တွေနဲ့ Thickness measurement equipment လို၊ testing equipments တွေကို၊ ဖွင့်ကြည့်တာတွေ၊ ဖြုတ်ကြည့်တာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ Ionization smoke detectors တွေရဲ့ကိုယ်ထည်မှာ၊ radioactivity symbol နဲ့ radioactivity amount ပမာဏ ကိုရေးသားဖော်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ Ionization smoke detectors တွေထဲမှာ၊ AM 241 ဟာ၊ americium dioxide အနေနဲ့ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အလေးချိန်ပမာဏအနေနဲ့ 0.29 micrograms ခန့်ရှိကာ၊ အနည်းဆုံး radioactivity တနည်းအားဖြင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်မှုဆိုတဲ့၊ radiation ပမာဏအနေနဲ့ 1 µCi ခန့်ရှိပါတယ်။
စွန့်ပြစ်တဲ့အခါမှာလည်း၊ ရေထဲကို ပြစ်ချလိုက်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် သဘေ်ာပေါါက incinerator တွေ ထဲ ထည့်ပြီး၊ မီးရှို့ဖျက်စီးလိုက်တာမျိုးတွေကို မလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ spare Ionization smoke detectors တွေ ကို မှာယူကတည်းက၊ ပါလာတဲ့အိပ်ထဲ စွန့်ပြစ်မယ့် detectors တွေကိုထည့်ပြီး၊ ဆိပ်ကမ်းရောက်တဲ့အခါ၊ သဘေ်ာကိုယ်စားလှယ် မှတဆင့် စွန့်ပြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် မူလထုတ်လုပ်သူထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီး၊ စွန့်ပြစ်စေခြင်းတို့ ကိုဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
Image Credits to : http://www.googlelunarxprize.org, www.element-collection.com
Posted by ဒူဒူကြီး at 23:51